गसिप Archives - सबैको समाचार
हाँस्य रियालिटी शो ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ बन्द हुने भएको छ। आगामी साताको एपिसोडसँगै कलाकार जितु नेपालले निर्माण निर्देशन र सञ्चालन गर्दै आएको हाँस्य रियालिटी सो ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ बन्द हुने भएको हो। कार्यक्रममा पात्र, स्टुडिओलगायतको समस्या भएकाले कार्यक्रम बन्द गर्न लागिएको सञ्चालक जितु नेपालले जानकारी दिए। ‘पात्रहरूले पनि धो का दिए। एउटा रियालिटो शो लामो […]
काठमाडौं । नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारी पछिल्लो केही समयदेखि मिडियासँग भागिरहेका छन् । उनीहरूको डर एउटै छ, आफूहरूबीचको अन्तरंग सम्बन्धबारे सोधिनसक्ने प्रश्न । करिब दुई महिना अघिदेखि समीक्षा र पलको ‘प्रेम प्रकरण’ बारे कलाकारिता क्षेत्रमा चियोचर्चो सुरू भएको थियो । तर, सार्वजनिक चर्चामा आइसकेको थिएन । अब भने यो विषय लुकाएर लुक्ने […]
यसरी ‘माया’ बोलाउँदैछन् गायक कृष्ण समिप
मन परेको मान्छेलाई पर्खिनुजस्तो दिक्दारी अरु के होला? घन्टौँ कुराउनेसँग कति रिस उठ्ला। जसको प्रतीक्षा तीव्र छ, उही मानिस जब ढिलो आइपुग्छ, त्यसपछि कि गाली गर्न मन लाग्छ, कि नबोली हिड्दिन मन लाग्छ। तर प्रेममा भने गाली गर्न भन्दा पनि घुर्क्याउने चलन छ। मन परेको मान्छे ढिलै आएपनि मनमा खुशी त हुन्छ नै, तर […]
काठमाडौं । गायिका प्रविशा अधिकारी बिबाह बन्धनमा बाँधिने भएकी छिन् । आगामी मंसिरमा प्रेमी निर्माण सिटौलासँग प्रविशाले विवाह गर्न लागेकी हुन् । प्रेमी निर्माण सिटौला हाल अमेरिकामा रहेका छन् । यहीँ असोजमा बिहे गर्ने तयारी गरिए पनि केही कारणले मंसिरका लागि तय भएको छ ।
काभ्रेमा नेपाली कांग्रेसले नै विजयको झण्डा फहराउँछ: गणेश लामा
काभ्रे, मंसिर १८ । मेरो उम्मेदवारी काभ्रेको समग्र विकास अनि सम्पन्नताको लागि हो । म बिपीको समाजवादी चिन्तन आत्मसात् गर्दैै आएको व्यक्ति हो । नेपाल र नेपाली तथा काभ्रेबासीको सेवा गर्न म राजनीतिमा आएको हुँ । मेरो उपस्थिति अहिले मात्र हैन २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा पनि थियो । यसर्थ मेरो उम्मेदवारी काभ्रैको विकासको लागि […]
शरद ऋतुको आगमनसंगै हिन्दुहरुको महान पर्व दशैंको आगमन भइ सकेको छ । गाँऊ होस् वा शहर, धनी होस् वा गरिब, बृद्ध हुन वा बालक सबै जना दशैंको तयारीमा जुटेका छन । दशैंको तयारीमा गाँऊका घरहरु रंङ्गरोगन गरी सिंगारिन थालिएको छ । बजारमा दशै.को किनमेल सुरु भएको छ । दशैंको किनमेल गर्नेहरुको भिडले बजार तातेको छ […]
बनेपा महोत्सव तयारी सम्पन्न सञ्चारमन्त्रीद्धारा समउद्घाटन गर्ने
काभ्रे,भाद्र २७ ,३बर्षपछि काभ्रेमा बनेपा मेला–महोत्सवको तयारी सम्पन्न भएको छ । महोत्सव भोलिदेखी सुरु हुदैछ । विजया दशमीको अवसर पारेर भदौ २८ गतेदेखि असोज १० गतेसम्म ‘बनेपा महोत्सव’ हुन लागेको हो । बनेपा व्याइज क्लवको आयोजनामा कला, सस्कृति, कृषि, घरेलु उद्योग तथा व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यले ‘उग्रेश्वर व्यापारिक, सास्कृतिक मनोरञ्जनात्मक खेल मेला– बनेपा महोत्सव २०७४’ […]
काठमाडौँ, भदौ १२ । आजको नागरिक काष्ठमण्डपमा इन्दिरा जोशीसँगको कुराकानी प्रकाशित छ । कुराकानीको केही अंश: नेपालभित्र मनपर्ने सहर ? -मेरो सबैभनदा प्यारो सहर पोखार हो । नेपाल बाहिर कुन-कुन देशका सहर घुम्नुभएको छ ? -मैले झण्डै ३० देशको सह घुमेको छु । अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मन, सिंगापुर, बेलायत, चीन, कोरिया, दुबई, कतार, इटली, क्यानडा, स्विट्जरल्यान्ड, […]
जेठ २१, काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा पहिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर लोकप्रियता कमाउन खोजे । शपथ ग्रहणकै दिन जनप्रतिनिधिबीच भत्ता बढाउने होडबाजी चल्यो । भत्ता बढाउने घोषणा गर्न महानगरका मेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्म पछाडि परेनन् । होडबाजी यतिसम्म चल्यो, केन्द्र सरकारले बजेटमा छुट्टाएको रकमबाट आफूखुसी भत्ता नबढाउन निर्देशन नै दिनुपर्‍यो । पहिलो चरणमा […]
टेलिशृंखला ‘भद्रगोल’ का ‘पाँडे’ हास्य अभिनयका चर्चित पात्र हुन् । फटाहा प्रवृत्तिको गाउँले बुढाको भूमिकामा पाँडेको अभिनय खुब रुचाइएको छ । उनै पाँडेको सक्कली नाम हो, अर्जुन घिमिरे । नुवाकोटका घिमिरेको आफ्नो अभिनय चरित्र ‘पाँडे’बारे केही रहस्य यस्ता छन् । ०७० अघि ‘सिस्नुपानी’ सिरियलमा काम गर्थे । त्यति बेला कुमार कट्टेल ‘जिग्री’ ‘मेरी बास्सै’मा अभिनय […]